Vietnam – NU MYAT AROUND THE WORLD
April 23, 2022 Posted in UncategorizedTagged VietnamLeaveacomment
Cu Chi Tunnels of Vietnam
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော်နေရာဖြစ်သည့် ကူချီမြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းများ (Cu Chi Tunnels) သည် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်း အသုံးပြုရန် တည်ဆောက်ထားသည့် လှိုဏ်ခေါင်းများဖြစ်သည်။ ဟိုချီမင်းမြို့မှ တစ်နာရီကျော် မောင်းလျှင်ရောက်သည့် ကူချီခရိုင်တွင် တည်ရှိသည်။ စစ်ပွဲအတွင်း ပိုအားသာနေသည့် အမေရိကန်နှင့် တောင်ဗီယက်နမ်တပ်များကို နှိမ်နင်းရန် ဗီယက်ကောင်း ကွန်မြူနစ်ပြောက်ကျားတပ်များက မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများကို တူးဖော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် စစ်ပွဲအကြွင်းအကျန်ပြတိုက်အဖြစ် ပြသထားသဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို ဆွဲဆောင်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
ဤဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည် မိုင်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ရှည်လျားပြီး အထပ် ၃ထပ်ရှိကာ စစ်ပွဲအတွင်း ဗီယက်ကောင်းပြောက်ကျားတပ်၏ ဌာနချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနေထိုင်ရန်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ထားရှိရန်၊ လက်နက်များပြုလုပ်ရန်၊ ထောင်ချောက်များဆင်ရန်၊ ချုံခိုတိုက်ခိုက်ပြီး ထွက်ပြေးပုံးခိုရ လွယ်ကူရန် တူးဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြေအောက်တွင် လမ်းကြောင်းများ၊ သိုလှောင်ခန်းများအပြင် အိပ်ခန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့် မီးခိုးတိတ်မီးဖိုချောင် တို့လည်းရှိသဖြင့် ရွာလေးတစ်ရွာသာမဟုတ်ဘဲ မြေအောက်မြို့ငယ်လေးအဖြစ်တောင် မြင်နိုင်ပါသည်။
ဤဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစနစ်ကို ဖျက်စီးရန် အမေရိကန်စစ်တပ်က မျိုးစုံကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း လုံးလုံးလျားလျား မဖျက်စီးနိုင်ခဲ့ပေ။ ဆိုင်ဂုံမြစ်အတွင်း ပေါက်သည့် အမျိုးမျိုးသောထွက်ပေါက်များ၊ ဗုံးခိုကျင်းများနှင့် ထောင်ချောက်များကြောင့် ဖျက်စီးရခက်ခဲခဲ့ပါသည်။
ကူချီဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစနစ်တွင် တည်နေရာအမျိုးမျိုးရှိသလို ရန်သူများနှင့် အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များကို တားဆီးရန် အထူးပိတ်ထားသော တံခါးများလည်းရှိသည်။ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများအားလုံးသို့ မြေပြင်မှ ဝင်ပေါက်များရှိပြီး ထိုအပေါက်များရှိ လျှို့ဝှက်တံခါးများကို ရန်သူများမမြင်ရအောင် သစ်ရွက်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဝင်ပေါက်သည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းလှသည်။ အကောင်သေးသော ဗီယက်နမ်လူမျိုးများသာဝင်နိုင်ပြီး အကောင်ကြီးသော ရန်သူများအလွယ်တကူ မဝင်ရောက်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
လာရောက်လေ့လာသူများအနေဖြင့် မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းများအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဝင်ပေါက်နှင့် လမ်းတလျှောက်ကျဉ်းသော်လည်း အထဲမှာ ကုန်းပြီးလမ်းလျှောက်လို့ရသည်အထိ ကျယ်ပါသည်။ တချို့နေရာတွင် လူတစ်ကိုယ်စာသာကျယ်သော်လည်း တချို့အခန်းတွေမှာမူ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိပါသည်။
လှိုဏ်ခေါင်းဝင်ပေါက် အနီးတဝိုက် မြေပြင်ပေါ်တွင်လည်း ချွန်ထက်သောဝါးချောင်းများဖြင့် ဖုံးကွယ်ထားသော ကျင်းများကဲ့သို့ ထောင်ချောက်များစွာ ဖန်တီးထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဝန်ထမ်းများက ထောင်ချောက်များ အလုပ်လုပ်ပုံကို သရုပ်ပြပါသည်။ ထိုခေတ်က ဗီယက်ကောင်း ပြောက်ကျားတပ်များ၏ နေ့စဉ်ဘဝကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ရုပ်တုများကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ဗီယက်ကောင်းများစားသုံးခဲ့ရသည့် မီးခိုးတိတ်လက်ရာ အစားအစာများကိုလည်း မြည်းစမ်းခဲ့ရပါသည်။
ကူချီမြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းများသို့ သွားရောက်လေ့လာလိုပါက Ben Dinh နှင့် Ben Duoc ဟူရ် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။ Ben Dinh အပိုင်းသည် ဆိုင်ဂုံမြစ်ဘေးတွင်တည်ရှိပြီး လှိုဏ်ခေါင်းအား ပြန်လည်တည်ဆောက် ချဲ့ထွင်ခဲ့သဖြင့် ခရီးသွားများ ပိုမိုလာရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိကြပါသည်။ မြေအောက်အိပ်ခန်းများပါရှိသော ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ၄ ခုရှိသလို စစ်ပွဲအတွင်းအသုံးပြုသည့် သေနတ်များကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပစ်ခတ်နိုင်သည့် သေနတ်ကွင်းလည်းရှိသည်။ ထို့အပြင် ဆေးရောင်ထွက်သည့်သေနတ်များဖြင့် စစ်တိုက်သကဲ့သို့ ဆော့ကစားနိုင်သည့် Paintball Game ကို အဖွဲ့လိုက်ကစားခြင်း၊ မြစ်ထဲတွင် လှေလှော်ခြင်းနှင့် စက်ဘီးစီးခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Ben Duoc အပိုင်းတွင်မူ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းစနစ်က ကျဉ်းမြောင်းသဖြင့် လူအလာနည်းပါသည်။ Ben Dinh ထက် ငါးဆပိုကြီးသော Ben Duoc သည် ပိုမိုစွန့်စားလိုသူများအတွက် သင့်လျော်ပြီး Ben Duoc Memorial Temple နှင့် Hoang Cam Kitchen ကဲ့သို့သော စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာများလည်း ရှိပါသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရောက်ပါက လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် ကူချီမြေအောက်လှိုဏ်ခေါင်းများသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် မြေအောက်တွင် ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရသည့် ဘဝများကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အသက်ရှုကျပ်တတ်သူ၊ အမှောင်ကြောက်သူ၊ အလုံပိတ်နေရာတွေ ကြောက်တတ်သူတွေကတော့ ဝင်မကြည့်သင့်ပါ။
(Dr.Nu Myat Theingi Oo)
November 16, 2016 April 20, 2021 Posted in Asia, Travel, Uncategorized, VietnamTagged Asia, Bana Hills, Bangkok Airways, Cable Car, Danang, Experience, French Village, Travel, VietnamLeaveacomment
Fairy Tale French Village of Bana Hills
💕ဝါကျွတ်ပြီဆိုတော့ Prewedding ရိုက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဟန်းနီးမွန်းထွက်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကို Romantic ဆန် တာနော်
💕ဥရောပထိ ဝေးဝေးလံလံသွားစရာမလို အနီးအနားမှာတင် ဥရောပ အငွေ့အသက် တကယ်ခံစားရမှာ
💕Vietnam နိုင်ငံ တောင်ပေါ်မြို့လေး ဒါနန်းရဲ့ Ba Na တောင်ပေါ် ဆောက်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ပြင်သစ်မြို့လေးပါ
အသေးစိတ်ကို ပုံလေးတွေနဲ့လည်း တစ်ပုံချင်းစီ ပုံဖော်ပေးထားပါတယ်။
✈ ဒါနန်းကို ဘယ်လိုသွားမလဲ ✈
ဒါနန်းကို ရန်ကုန်ကနေ တိုက်ရိုက် Flight မရှိပါဘူး။ ဒါနန်းက Vietnam နိုင်ငံရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေတာဆိုတော့ မြောက်ဘက် ဟနွိုင်းကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောင်ဘက် ဟိုချီမင်းကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် Domestic Flight တစ်ခါ ပြန်စီးမှ ရမှာပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဘန်ကောက်ကနေ သွားလည်းရပါတယ်။ အခုဆို Bangkok Airways က Bangkok to Danang Flight တွေ တစ်ပတ် ၅ရက်ပြေးဆွဲနေပြီဆိုတော့ သွားလို့ တော်တော် အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ နုမြတ်တို့တုန်းက ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက်ကို အရင်သွား၊ ဘန်ကောက်မှာ Shopping ထွက်၊ တစ်ညအိပ်ပြီးမှ ဒါနန်းကို ဆက်သွားတာပါ။
ဘန်ကောက်မှာ တစ်ည မအိပ်ပဲ ဒါနန်းကို တန်းသွားမယ်ဆိုရင် Ygnကနေ Bkk ကို မနက် ၆နာရီ Flight နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ Transit Time ၃နာရီ အတွင်း ဘန်ကောက် သုဝဏဘူမိလေဆိပ်ကြီးမှာ Shopping ထွက်ချင်ထွက် ဒါမှမဟုတ် Bangkok Airways Lounge မှာ အေးအေးဆေးဆေး နှပ်နေလို့ရတယ်။ အဲ့ Lounge က Bangkok Airways ရဲ့ Transit ခရီးသည်တိုင်း လာအနားယူလို့ရတော့ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေတယ်။ Wifi လေး သုံးရင်း High Tea Buffet ကျွေးတဲ့ မုန့်လေးတွေစား၊ အအေးတွေ ကော်ဖိတွေ သောက်နဲ့ ပျော်စရာပါ။ အဲ့က ကောက်ညှင်းထုပ်ဆို စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ အရသာရှိလို့ ဧည့်သည်တွေဆို ကြိုက်မှကြိုက် … ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေလည်း ငန်ကျိကျိနဲ့ စားလို့ကောင်းတယ်… တကယ်! Business Class တွေ အတွက်ဆို ပိုလို့တောင် အစားအသောက်စုံသေး။ Menu ကြည့်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တာမှာစား။ ချက်ချင်း ချက်ကျွေးတာ။ အားလုံး Free နော်
ဘန်ကောက်ကနေ ဒါနန်းကို ၁နာရီခွဲလောက်ပဲ လေယာဉ်စီးလိုက်ရင် ရောက်ပြီ။
ဒါနန်းမြို့ကနေ Bana Hill ကိုတော့ ကားနဲ့ဆို ၄၅မိနစ်လောက် မောင်းရပါတယ် ။
တောင်ခြေကနေ တောင်ပေါ်ကို Cable Car စီးပြီး သွားရပါတယ်။ Cable Car ဆိုတာ ကြိုးဆွဲ ကောင်းကင်ရထားလုံးလေးတွေပါ။ ရေတံခွန်ကြီးတွေ တောတောင်တွေ အပေါ်ကနေ Cable Car နဲ့ တရွေ့ရွေ့သွားရတဲ့ Feel က တအားမိုက်ပါတယ်။ တောင်ဆင်းလမ်းက ရှုခင်းတွေဆို ပိုလို့တောင် လှပါသေးတယ်။ နုမြတ်တို့ သွားတဲ့ အချိန်က မိုးမကုန်သေးတော့ မြူတွေ ဆိုင်းနေတာ။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ မြူတွေကြား စိမ်းစိုနေတဲ့ ရှုခင်း တခါတခါ ပေါ်လာတာ ပျော်စရာကောင်းသလို ရင်တဖိုဖိုလည်း ဖြစ်ရတယ်။ Bana Hill အပေါ်မှာ cable car ၃ခုတောင်ရှိပြီး၊ အဲ့ထဲက နောက်ဆုံးဖွင့်လိုက်တဲ့တစ်ခုက ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး Single Rope Cable car System ဖြစ်ပါသတဲ့။ နောက်ပြီး တောင်အောက်ခြေကနေ မီတာ ၁၃၆၈ အမြင့်ထိတက်နိုင်လို့ အမြင့်ဆုံး တက်နိုင်တဲ့ Cable Car လည်း ဖြစ်ပါသတဲ့လေ…
The Cable Car Station is left behind
Cable Car ေပၚ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
Cable Car andaWaterfall
We are on the Waterfall
တောင်ပေါ်မှာက တောင်ထိပ်တစ်ခုစီအပေါ်မှာ Theme တစ်ခုဆီ လုပ်ထားတာဆိုတော့ အရင်ဆုံး ပြင်သစ်ပန်းဥယျာဉ်ခြံကြီးထဲ အရင်သွားပါတယ်။ အဲ့ကိုသွားဖို့ Fanicular လို့ခေါ်တဲ့ တောင်တက်ရထားလေး စီးရပြန်ပါတယ်။ ရထားလေးကလည်း ရှေ့ပွင့်နောက်ပွင့်ဆိုတော့ စီးရတာပျော်စရာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရှေ့ဆုံး or နောက်ဆုံးမှာ နေရာယူပါ။ ရှူခင်းတွေခံစားရင်း တရွေ့ရွေ့တက်ရတာ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းလို့ပါ။
The Fanicular is coming
The mysterious railway
We are in the rarest cabin. Having fun on the way to Bana Hills peak.
ဥယျာဉ်ကြီးထဲ ပန်းခင်းတွေထက် ပိုလှနေတာကတော့ ရုပ်တုကြီးတွေပါ။ ဖြူဖွေးနေတဲ့ စကျင်ကျောက် နတ်မိမယ်ရုပ်ကြီးတွေ၊ ဧရာမ လိပ်ပြာရုပ်ကြီးတွေ၊ ဧရာမစစ်တုရင်ရုပ်ကြီးတွေ၊ စီတန်းထားတဲ့ တိုင်ဖြူဖြူလေးတွေကြား ရှေးဟောင်း ဘုရင့်ပန်းခြံထဲ ရောက်သွားသလိုလို….
Mythical Garden Gate
White columns in the garden
A great view behind. Wish I can spend more time there sippingaaromatic wine.
ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ Love garden, heaven garden, legend garden, secret garden ဆိုပြီး နာမည်အမျိုးမျိုး Theme အမျိုးမျိုးနဲ့ ပန်းခြံ ၉ခုထပ်ခွဲထားပါသေးတယ်တဲ့
ပန်းခြံကနေ တောင်ဆင်းရထားနဲ့ ပြန်ဆင်းပြီး နောက်တစ်တောင်ကို Cable car နောက်တစ်ခု နဲ့ တက်ရပြန်ပါတယ်။ Station ကနေ ထွက်ထွက်ချင်း မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက မှင်သက်စရာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Vietnam ရောက်နေတယ် ဆိုတာကိုတောင် မေ့သွားပါတယ်။ ကျောက်ခင်းထားတဲ့ ရင်ပြင်အလယ်က ရေပန်းလှလှလေးကို ဥရောပ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေ ဝန်းရံထားတာ လှမှလှ။ လမ်းလေးတွေကလည်း ကျောက်ခင်းလမ်းလေးတွေ။ အနောက်တိုင်း စိတ်ကူးယဉ် ပုံပြင်တွေထဲက ရှေးဟောင်းမြို့လေး ရောက်သွားသလိုလို… တကယ်ကို ဥရောပ အငွေ့အသက်ခံစားရပါတယ်။
wonderful square just right outside of the cable car station on the peak of the hill
Church on Bana Hills
Statue on the wall
Haveagreat pose on the cycle
In the French Village
အဆောက်အအုံတွေ ရုပ်တုတွေ လမ်းညွှန် ဆိုင်းဘုတ်တွေက အစ အသေးစိတ် လုပ်ထားတာ။ လမ်းတွေမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Music တွေကအစ ငြိမ့်ငြိမ့်ငြောင်းငြောင်းလေး။
🎠 #Fantasy_Park ကစားကွင်း 🎡
French Village လေးထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေလှည့်ပတ်ရိုက်ပြီး၊ နေ့လည်စာလည်းအဲ့က Vietnam ဆိုင်လေးမှာ စားပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ Fantasy park လို့ခေါ်တဲ့ Indoor ကစားကွင်းထဲ ဝင်လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ထဲမှာကလည်း ကစားနည်းတွေ ၉၀ကျော်တောင်ရှိတာ။ journey to the center of the Earth စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး ဆောက်ထားတာမို့လို့ Theme Park ထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ မြေအောက်ရောက်သွားသလိုလို။ အဲ့မှာ ဒိုင်နိုဆော ပန်းခြံတွေ၊ Fairy land တွေလည်း ရှိသေးသတဲ့၊ အချိန်မရှိလို့ ဘာမှ မကစားလိုက်ရဘူး 😥
Journey to the center of the earth, the most famous ride there
အဲ့ fantasy park ထဲမှာ ဖယောင်းပြတိုက်ကြီးလည်းရှိတယ်။ တကယ့် ကမ္ဘာကျော် ဆယ်လီတွေရဲ့ ဖယောင်းရုပ်တုတွေနဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်လို ပျော်ပျော်ပါးပါး တွဲရိုက်လို့ရတယ်။ အိုက်တင်ပေးတတ်ရင် ပေးတတ်သလို ပုံတွေက ပျော်စရာကောင်းနေမှာနော်
The entrance to the Bana Hills waz Museum
Jet Li, Gong Li & Nu Li
🎢 #Alpine_Coaster 🎢
ဒါကတော့ bana Hill ရောက်သူတိုင်း စီးကြတဲ့ တစ်ယောက်စီး Roller Coaster ပါ။ လျပတဲ့ ရှုခင်းနောက်ခံနဲ့ အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်းစီးရတာဆိုတော့ စီးဖူးတဲ့သူတိုင်း အရမ်းပျော်ကြတယ်။ မိုးရွာနေလို့ အဲ့ဒါလည်း မစီးရဘူး။ စိတ်တောင်မကောင်းဘူး 😥
Solo Coaster on Bana Hills
Alpine coaster seen from cable car
🏯 #Temples 🏯
ဗုဒ္ဓဘာသာ အများစုနေထိုင်တဲ့ ဒါနန်းမြို့လေးရဲ့ ဘာနာတောင်ထိပ်မှာ ဘုရားကျောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိလို့ သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ပါသေးတယ်။
💸 ဘယ်လောက်ကျသလဲ 💸
Bana Hill မှာ ဝင်ကြေးက Vietnam ပိုက်ဆံ ၆သိန်း (ကျပ် ၃သောင်းခွဲလောက်) ပေး၇ပါတယ်။ Ticket ဝင်ကြေးထဲမှာ အားလုံး အပြီးအစီးပါပါတယ်။ ဘာမှ ထပ်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး ။ ကစားကွင်းထဲ ကြိုက်သလောက်ကစားနိုင်ပါတယ်။
Entrance Tickets to Bana Hills
Bana Hill ပေါ်မှာက လည်စရာတွေများလို့ တစ်နေကုန် အချိန်ပေးမှ အကုန်နှံ့မှာပါ။ ညအိပ်နိုင်ရင်ပိုလို့တောင် ကောင်းပါတယ်။ Newly married Honeymoon couple တွေ ပြင်သစ်ရွာလေးထဲက Bana Hill Resort မှာ တစ်ညလောက်အိပ်၊ Romantic ဖြစ်လှတဲ့ Garden ကြီးထဲမှာ Wine လေးသောက်၊ ချစ်စကားလေးတွေဆိုနဲ့ အရမ်း ကို Romantic ဖြစ်မှာပါ။ Pre wedding photo ရိုက်သူတွေအတွက် Charges ထပ်မကောက်လို့ ကြိုက်တဲ့နေရာ ကြိုက်သလောက်ရိုက်နဲ့ ပျော်စရာပါ…
ပိုက်ဆံအကုန်အကျမများဘဲ ရက်အကြာကြီးပေးစရာမလိုဘဲ ဥရောပအငွေ့အသက်ကို ရနိုင်တဲ့ တအား Romantic ဖြစ်တဲ့ နေရာလေးမို့လို့ share ပေးလိုက်တာပါ။ တကယ်လှမလှ၊ ပျော်စရာ ကောင်းမကောင်းကို အောက်ကပုံလေးတွေမှာသာ ကြည့်ကြည့်ကြပါတော့
🌏ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားလည်မယ့်သူတွေ အတွက် ခရီးစဉ် အကြမ်းဖျဉ်းလေးပါ🌏
Day 1- ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်-ဒါနန်း (Bangkok airways)
ဒါနန်းကို နေ့လည် ၁၂လောက်ရောက်။ ဟွေးမြို့ကို တန်းသွား။ ၂နာရီလောက် ကားမောင်းရ။ ဟွေးမှာ နန်းတော်ထဲလေ့လာ။ ဘုရားသွား။ ညဘက်မြစ်ထဲ လှေစီး။ ဟွေးမှာ ညအိပ်
Hue မြို့ကနေ Danang ပြန်။ Bana Hill တန်းသွား။ ကားနဲ့ ၃နာရီလောက် ကြာမယ်။ Bana Hill တောင်ပေါ်တစ်နေကုန်နေ။ တောင်ပေါ်က Resort မှာ ညအိပ်။ (အဲ့မှာ ညမအိပ်ရင် ၁ရက်လျှော့လို့ရတယ်။ )
တောင်ပေါ်က ပြန်ဆင်း။ Danang မြို့ထဲက စကျင်ကျောက်တောင်ပေါ်တက်။ စကျင်ရုပ်ထုတဲ့နေရာ သွားလေ့လာ။ Hoi An မြို့ကူး။ အဲ့က old Town မှာ ညဈေးလျှောက်။ Hoi An or Da Nang မှာ ညအိပ်
danang – bangkok – yangon ပြန် (with Bangkok Airways)
အားလုံးလှပပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့ရက်များစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်😘😘
All photos with watermark Nu Myat around the World are taken and copyrighted by Nu Myat.
Other photos are from Bana Hills official website.